Deepfake Technology Inogadzira Sei Kushambadzira? | Martech Zone
Chitatu, December 30, 2020 Chitatu, December 30, 2020 Douglas Karr
Kana usati wambozviedza izvozvi, pamwe nharembozha app yandave kunakidzwa kwazvo gore rino iri Revel. Iyo mobile application inokutendera iwe kutora kumeso kwako uye kutsiva kumeso kwechero ani mune imwe pikicha kana vhidhiyo mukati me database yavo.
Nei Ichinzi Inzi Yakadzika?
Deepfake mubatanidzwa wematemu Deep Learning uye nyepera. Deepfakes inowedzera kudzidza kwemuchina uye huchenjeri hwekunyepedzera kushandisa kana kuburitsa zvinoonekwa uye odhiyo zvemukati zvine mukana wepamusoro wekunyengera.
The Revel mobile application iri nyore kushandisa uye mhedzisiro yacho inogona kusekesa. Ini ndichagovana mimwe mibairo yangu pano. Rutivi runyorwa ... ivo havanyengere zvakanyanya, vanongonyadzisa, vanotyisa, uye vanoseka.
Nzvimbo yakagoverwa Douglas Karr (@kudzaimedia)
Dhawunirodha Reface App
Vari Kwakadzika Kwakawedzera Kutyisa Kupfuura Kunakidza?
Nehurombo, isu tinorarama mune imwe nyika iyo disinformation yakapararira. Nekuda kweizvozvo, yekudzika tekinoroji ndeimwe isingagone kushandiswa mune chimwe chinhu chisina mhaka sekundiita kutamba kana nyeredzi muvhi ... ivo vaigona kushandiswa kufambisa disinformation futi.
Fungidzira, semuenzaniso, mifananidzo, odhiyo, kana vhidhiyo vhidhiyo iyo inoshandisa yakadzika tekinoroji kumisikidza wezvematongerwo enyika. Kunyangwe ikazivikanwa seyakadzika, mhedzisiro inogona kufamba nekumhanya kwemasocial media kushandura maonero evhoti. Uye, zvinosuruvarisa, chikamu chakakura chevavhoti - nepo vashoma - vaigona kuzvitenda.
Heino vhidhiyo huru kubva kuCNBC pane iri nyaya:
Sezvaunogona kuona iwe, vatongi uye yekuona tekinoroji iri kuve inozivikanwa zvakanyanya kuyedza kurwisa yakadzika tekinoroji. Pasina mubvunzo ichava inonakidza…
Deepfakes Inogona Sei Kushandiswa Kushambadzira?
The tekinoroji yekugadzira yakadzika midhiya yakavhurwa sosi uye inowanikwa mukati mewebhu. Kunyange tichizviona mumafirimu emazuva ano (mifananidzo yaCarrie Fisher kubva kuma1970 yakashandiswa mukudzika muRogue One), hatina kumbovaona mukushambadzira… asi tichadaro.
Kuvimba kwakakosha mune chero hukama pakati pemutengi uye brand. Kunze kwekugadziriswa kwepamutemo, chero bhizimusi rinotarisa kuendesa yakadzika tekinoroji mukutengesa kwavo uye kushambadzira kwekuedza kunofanirwa kutora zvishoma ... asi ini ndinoona mikana:
Yakasarudzika midhiya - mhando dzinogona kuburitsa midhiya nechinangwa chega chekuti vatengi vavo vazviise vega. Fungidzira vagadziri vefashoni, semuenzaniso, vachigonesa munhu kuisa kumeso kwavo nemuviri wakafanana muvhidhiyo ye runway. Ivo vaigona kuona mafashoni anotaridzika zvinoonekwa (mukufamba) vasina kumbobvira vaedza pachipfeko.
Yakakamurwa midhiya - kurekodha nekugadzirisa mavhidhiyo kunogona kunyanya kudhura uye mabhenji ari kubhadhara zvakanyanya nekuwedzera kumiririro yehuwandu hwevanhu netsika dzinoratidzwa. Munguva pfupi iri kutevera, mucherechedzo waigona kurekodha vhidhiyo imwe - asi shandisa yakadzika tekinoroji kupatsanura meseji inomiririra huwandu hwevanhu netsika mukati mayo.
Vhidhiyo Unganisa - zvigadzirwa zvinogona kuve nevamiriri vazvo vekutengesa kana vatungamiriri nyeredzi mumavhidhiyo ari akadzika asi ayo akagadzirirwa kutaurirana zvakananga netarisiro kana mutengi. Iyi mhando yehunyanzvi yatovepo neplatform Synthesia. Kunyange ini ndichitenda kuti mabrand anofanirwa kuburitsa zvakadzika, iyi inzira inobata maziso yekutaura zvakananga kumunhu wega wega.
Midhiya yakadudzirwa - zvigadzirwa zvinogona kushandisa vanokurudzira pamitauro yese. Heino muenzaniso unonakidza waDavid Beckham - uko chimiro chake chinokwezva kutariswa, asi meseji yacho inoshandurwa nemazvo. Mune ino kesi, ivo vanoshandisa mamwe manzwi uye yakadzika tekinoroji yekufamba kwemuromo… asi ivo vangadai vakashandisawo deepfake kutsiva odhiyo.
Mune yese iyi mienzaniso, iyo deepfake haipo yekunyengera asi yekuvandudza kutaurirana. Mutsetse mutete… uye mabhizinesi anozofanira kungwarira achifamba!
Ngatipedzei izvi pane chinyorwa chakanaka…
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu yakabatana link yeiyo Reface app. Ini ndinokurudzira zvikuru iyo yakabhadharwa vhezheni iyo inopa toni yekuwedzera midhiya yekusvibisa nayo.
Tags: affiliatekudzidza zvakadzikadzikadzikayakadzika tekinorojigadzirisazve